ONA: David Lynch Akadzima HBO Series, 'Kamuri Yehotera' iBrilliant Yakavanzika Gem
musha Horror Varaidzo Nhau TARIRA: David Lynch Akadzima HBO Series, 'Kamuri Yehotera' iBrilliant Yakavanzika Gem
yakanyorwa na Trey Hilburn III April 21, 2021
Tarisai varume, ndatarisisa zvese zvakaitwa naDavid Lynch. Ini ndinotya nezve surreal maestro uye akanaka maroto aanotungamira. Kubva Twin nenhongonya to Mulholland Drive, director akarova zvakakwana uye akatonhora huropi hwangu kumatanho akasiyana uye zvidimbu zvidiki. Ini ndinoda kuzvirova dundundu mukutendeka kwangu kutevera kwebasa raLynch. Ndakaona mafirimu ake mapfupi uye kunyangwe zvinhu zviri pakati. Kamwe zvakare iyo internet yakwanisa kufumura chimwe chinhu chakakwanisa kumbonyatso bvarura kapu yangu yakanangana nekumashure uye kuita katatu kutora.
Inochinja Lynch anga ashanda pane yeHBO nhevedzano inonzi Kamuri Yehotera. Iwo akateedzana yaive anthology ingadai yakatenderera kune imwe inoshamisa kamuri yehotera uye nyaya dzakadzika mukati memadziro ayo. Mhando dzakadai seHBO Room 104 kubva kuDuplass Hama, iwo akateedzana angadai aigara achitenderera munzvimbo imwechete iyoyo, achingo shandura uye akakodzera rondedzero yakatenderedza.
Zvakawanda saRod Serling Twlight Zone chiziviso, Kamuri Yehotera yakatanga naLynch achipa monologue mune yakasarudzika Lynch toni. “Kwemireniyumu, nzvimbo yeimba yehotera yaivepo, isina kujekeswa. Rudzi rwevanhu rwakaritora, ndokuripa chimiro ndokupfuura nepakati. Uye dzimwe nguva pavaipfuura, vaizviwana vachipesana nemazita akavanzika echokwadi. ”
Kamuri Yehotera yakaburitswa chinyararire paHBO muna1993. Chikamu ichi chakaratidza nyaya nhatu mbiri dzacho dzaitungamirirwa naLynch iye. Zvikamu zvitatu izvi zvakagadzira urefu hwenhare mutyairi uyo wakazokundikana kuyedzwa kwevanhu, zvinosuwisa.
Zvikamu zvacho zvaive zvakazara nesimba renyeredzi rakakura zvakare. Harry Dean Stanton, Crispin Glover naGriffiin Dunne vese vakapa hunyanzvi hwavo kuchirongwa cheLynch uye vakapa mamwe emitambo isingakanganwike kubhutsu. Munyori Barry Gifford zvakare akabatana naLynch mushure mekubatana kwavo pa Yakashata pamoyo. Gifford akanyora zvese zvikamu zvakarairwa naLynch.
Nguva refu mushandi Angelo Badalamenti akatoshanda pane zvibodzwa zve Kamuri Yehotera. Izvo zvinoita imba izere yevaLynch vanobatsirana yeakateedzana iyo yaingomirira, yakavanzika zvishoma, kuti iwanikwe.
Imba yeIhotera inoteedzana yakanaka. Icho chinhu chandingadai ndakaramba ndichitarisa kana ndikapihwa mukana. Asi, ndinofungidzira iwe unogona kuona kuti zvakakundikana sei. HBO yanga ichitsvaga anthology kuti iende munzira imwechete se Tales Kubva kuCrypt. Zviripachena, izvi zvikamu zvakanyatsogadzirwa hazvisi izvo. Asi, ivo chimwe chinhu chinoshamisa uye chisingarambike, Lynch.
Inoshandura izvo kusvika pano, Kamuri Yehotera ndakafarira pfupi pfupi VHS kuburitswa muno muUnited States. Iyo zvakare yakaburitswa muJapan pane yeChirungu laserdisc. Wataura, ndinoda kuwana iyo laserdisc yekuwedzera iyi kuunganidzwa kweLynch.
Chikamu chekutanga chete chakakosha uremu hwacho. Iyo setup yaHarry Dean Stanton naGlenne Headly inotanga yakanyarara yakadzikama zvakakwana naStanton achiraira magirazi maviri echimney aine bourbon, asi zvinyoronyoro anova chidimbu chinotyisa chengano dzakasungirirwa mune yayo claustrophobic inoperera. Zvese izvi mufashoni iri yakasarudzika Lynch.
Ndiri kutarisira kuti hatisi kure nekusunungurwa chaiko uye kwazvino Kamuri Yehotera asi, Panguva ino, nakidzwa neiyi inoshamisa diki Lynch nugget.
Samuel L. Jackson Anonyengedza 'Spiral: Kubva muBhuku raSaw' Trailer munguva pfupi. Tarisa uone apa.
crispin girovhosiDavid LynchGriffin DunneHarry Dean StantonHBOKamuri Yehotera